South African Airways: Ụgbọ elu si Johannesburg na Mauritius ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » South African Airways: Ụgbọ elu si Johannesburg na Mauritius ugbu a
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa na Mauritius • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ kacha ọhụrụ na South Africa • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
South African Airways: Si na Johannesburg gaa Mauritius ugbu a
SAA na -abịarute ọnwa mbụ nke ọrụ ya na ụgbọ elu mpaghara si Johannesburg gaa Cape Town na mpaghara gaa Accra, Kinshasa, Harare na Lusaka. Ọrụ Maputo kwa ụbọchị ga -amalite na Disemba 2021.
Mauritius nwere mmekọrịta siri ike na South Africa ma bụrụkwa njem na -ewu ewu na ebe azụmahịa.
A na-enyocha usoro ụzọ SAA mgbe niile ma na-enyocha ya n'usoro atụmatụ nzọpụta nke onye ọrụ ụgbọelu nke nkwado na uru.
SAA nwere obi ụtọ ịmaliteghachi ọrụ na Mauritius, nke na -ewu ewu na nke gara aga.
South African Airways (SAA) na -aga n'ihu wughachi netwọkụ ya site na ịmaliteghachi ọrụ na Mauritius site na Nọvemba 21, 2021. Ụgbọ elu ga -ebu ụzọ rụọ ọrụ ugboro abụọ kwa izu na Wednesde na Sọnde, na -apụ Johannesburg ma ọ bụ Tambo International (ORTIA) na 09:45 ụtụtụ na ụgbọ elu nloghachi na -apụ Mauritius na 04:35 pm.
South African Airways Onye isi ụlọ ọrụ nwa oge Thomas Kgokolo na -ekwu, “Akụkụ nke atụmatụ uto anyị bụ ịchọpụta ụzọ ebe enwere ihe achọrọ na nke nwere ike ịbara onye na -ebu ya uru. Mweghachi nke ọrụ na Mauritius na -emezu ụkpụrụ abụọ ahụ. Ọzọkwa, obodo a nwere mmekọrịta siri ike na South Africa ma bụrụkwa njem nlegharị anya na ebe azụmahịa. Anyị nwere obi ike na ntinye tiketi ga-adị ike, ọkachasị ka oge ọkọchị na-eru nso. ”
SAA na -abịaru nso ugbu a na ọnwa mbụ nke ọrụ ya na ụgbọ elu si na Johannesburg na Cape Town na mpaghara ruo Accra, Kinshasa, Harare na Lusaka. Ọrụ Maputo kwa ụbọchị ga -amalite na Disemba 2021.
Kgokolo kwuru na a na-enyocha atụmatụ ụzọ a na-enyocha ya mgbe niile dabere na atụmatụ nnapụta nke azụmaahịa nke azụmaahịa nke nkwado na uru.
"Nke a bụ ihe ezi uche dị na ya nke ndị na -anya ụgbọelu n'ụwa niile na -anabata maka ọnọdụ ihu igwe siri ike nke ụlọ ọrụ ahụ na -abanye na ya. Dabere na ibute ebe ndị dị ugbu a na ebe enwere mkpa n'ọdịnihu, anyị ga -agbakwunye ma belata ụzọ."
Kgokolo kwuru SAA na -enwe obi ụtọ ịmaliteghachi ọrụ na Mauritius, nke bụbu ewu ewu na uru n'oge gara aga.
Oge iji efe na -ala ma na -abata na mba ahụ bụ ihe dị ka awa anọ.